Kooxda Barcelona oo doonaysa inay gacanta ku soo dhigto Weeraryahan ka tirsan Manchester United – Gool FM
Haaruun December 8, 2021
(Barcelona) 08 Dis 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay doonayso inay gacanta ku soo dhigto Weeraryahan ka tirsan naadiga Manchester United ee ka dheesha horyaalka Premier Leage.
Jariiradda Mundo Deportivo ayaa warinaya in Barcelona ay doonayso inay bisha Janaayo u dhaqaaqdo soo xero-gelinta Weeraryahanka kooxda Manchester United ee Edinson Cavani.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Weeraryahanka Manchester United ee Cavani uu doonayo inuu dhaqaaqo, isla markaana uu raadsado Koox uu boos joogto ah ka helayo sanadaha yar ee uga harsan inuu ka fariisto ciyaaraha.
Barca ayaa dooneysa inay xoojiso safkeeda hore ee Jiilaalkan, waxayna arkootay Cavani, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxaana ay aaminsan tahay kooxda reer Spain inay weeraryahankan ku heli karto qiimo jaban, iyadoo heshiisyada ay la galayaan kooxaha kale sida midka Manchester City ay kaga doonayso Ferran Torres uu ka baxsan yahay awooddeeda dhaqaale.
Xiddiga reer Uruguay ayaa markii hore la filayay in uu ku dhammaysan doono heshiiskiisa Red Devils, laakiin haatan waxa uu diyaar u noqon karaa inuu isaga tago kooxda xagaagan kaddib markii lagu xaddiday hal kulan oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkan, iyadoo imaatinka Cristiano Ronaldo ay sii yaraanayso fursadihiisa.